Fitaovana fanipazana varahina manokana - mpamatsy ampahany amin'ny fanariana varahina any Sina - fanariana Minghe
Serivisy fanariana varahina - Orinasa famokarana varahina vita amin'ny varahina any Shina
IATF 16949 MANKATSITRA CAST HATSARATRA NY FANASAN'NY VAROTRA
Inona no atao hoe fanariana varahina? Ny firaka varahina amin'ny zinc ho singa mampangaroharo lehibe dia matetika antsoina hoe varahina. Ny firaka binary-zinc dia antsoina hoe varahina mahazatra, ary ny varahina ternary, quaternary na multi-element vita amin'ny alàlan'ny fanampiana singa kely hafa amin'ny firaka varahina-zinc dia antsoina hoe varahina manokana. -Zn firaka mimari-droa. Ny elanelan'ny mari-pana kristaly dia kely ary tsara kokoa ny fanatanterahana azy. Raha ampitahaina amin'ny varahina varahina dia manana toetra mekanika ambony kokoa ny varahina. Ankoatr'izay, satria ny varahina dia misy zinc marobe, dia ambany ny vidiny. Ireo no antony ampiasaina be dia be ny casting varahina.
Ny fanariana varahina dia ampiasaina hamokarana varahina ho an'ny fanariana. Ny famafazana varahina dia be mpampiasa amin'ny famokarana milina, sambo, fiaramanidina, fiara, fananganana ary sehatra indostrialy hafa, ary milanja lanjany amin'ny fitaovana vy tsy ferrous mavesatra, mamorona andiana varahina. Ny tombony amin'ny fizotran'ny fanariana varahina: famokarana ambany ny vidiny, ny fivelarana avo lenta, ny endrika sarotra ary ny casting be dia be azo, ary mitana ampahany betsaka amin'ny famokarana mekanika, toy ny fitaovan'ny milina mitentina 60 ka hatramin'ny 80%, ny fiara mitentina 25%, ary ny traktera miisa 25%. 50 ～ 60%.
Mitady faritra vita amin'ny varahina namboarin'ny mpanamboatra singa fanandramana za-draharaha sy azo antoka? Ny serivisy fanariana varahina any Minghe dia mety ho safidinao tsara. Manana traikefa fanariana 30 taona mahery izahay, manana fahaiza-manao manamboatra vokatra tsotra na sarotra vita amin'ny varahina, anisan'izany ny singa fanariana fantsom-bokatra avo lenta, singa fanariana famatsiam-bola varahina, singa fanariana afovoany varahina, singa fanariana fasika varahina ary singa fanariana fantsom-bolo very hihaona amin'ny anao mitaky amin'ireo mpandraharaha azo itokisana, milina sy fitaovana sarotra aroso aminay. Ireo singa fanariana varahina rehetra azonay dia iharan'ny fitondrana fizahana mafy ataonay miaraka amin'ireo mpanara-maso voatondro, ny fizahana ao anaty ary ny fizahana farany feno vita amin'ny lafiny rehetra.
Mifandraisa aminay ny injeniera momba ny fanariana varahina anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
Ny fampitahana fampisehoana fampisehoana eo anelanelan'ny varahina sy ny varahina
Raha ampitahaina amin'ny varahina sy varahina dia lehibe ny solubility zinc amin'ny varahina. Eo ambanin'ny fandanjana ny mari-pana ara-dalàna, 37% ny zinc no azo levona amin'ny varahina, ary manodidina ny 30% ny zinc dia azo esorina ao anaty fanjakana as-cast, raha varahina vita amin'ny tin any amin'ny fanjakana as-cast, ny ampahany betsaka amin'ny solubility matevina amin'ny tin ao Ny varahina dia 5% ka hatramin'ny 6% ihany, ary ny ampahany betsaka amin'ny solubilité vita amin'ny alimo alimo sy alimo ao anaty varahina dia 7% ka hatramin'ny 8% ihany. Noho izany, ny zinc dia tena zava-dehibe amin'ny varahina. Vokatry ny fanamafisana vahaolana tsara. Mandritra izany fotoana izany dia azo esorina amin'ny varahina ho an'ny ambaratonga miovaova koa ny ankamaroan'ny singa alloying, manatsara ny toetrany mekanika, izay mahatonga ny varahina, indrindra ny varahina manokana, manana ny toetran'ny tanjaka avo lenta, ary ny vidin'ny zinc dia ambany kokoa noho ny alimo, varahina ary firaka, ary manana loharano manankarena.
Ny habetsaky ny zinc ampiana amin'ny varahina dia betsaka kokoa, noho izany ny vidin'ny varahina dia ambany noho ny varahina vita amin'ny varahina sy ny alimo vita amin'ny alimina. Ny varahina dia manana mari-pana maripana solidification kely, fluidity tsara, ary fandefasana smelting mety. Satria ny varahina dia manana ny toetra voalaza etsy ambony momba ny tanjaka avo, ny vidiny ambany ary ny fahombiazan'ny fanariana tsara, ny varahina dia manana karazany maro kokoa, ny vokatra lehibe kokoa ary ny fampiharana midadasika kokoa noho ny varahina vita amin'ny varahina sy alimo vita amin'ny alimina vita amin'ny alimo varahina. Fa ny fanoherana fanoherana sy ny fanoherana ny harafesin'ny varahina dia tsy tsara toy ny varahina, indrindra ny fanoherana ny harafesina sy ny fanoherana ny varahina mahazatra dia ambany ihany. Rehefa ampiana singa firaka sasany hamorona varahina manokana, dia hatsaraina sy hatsaraina ny fanoherana sy ny fanoherana.
Ny fampisehoana casting amin'ny brass
Ny toetra mampiavaka ny fanariana ny varahina dia: ny zinc ao anaty varahina dia ny singa lehibe misy ny fihenan'ny varahina. Ny vaporization ny zinc dia manodidina ny 907 ℃, ary ny fihenan'ny varahina dia 900 XNUMX eo ho eo. , Zinc dia manana fironana lehibe manapotsitra sy manamaivana oksizenina. Ny famafazana varahina dia misy tsiranoka tsara, fa ny varahina manganese kosa mihena be, ary mora mihena, mamaky mangatsiaka ary mihasimba.
Raha jerena ireo toetra etsy ambony, ireto fepetra manaraka ireto dia tokony horaisina mandritra ny fandefasana azy:
- Misafidiana fotom-pasika misy alàlan'ny fihenam-bidy tsara hampihenana ny fikorontanan-tsaina ary hisorohana ny triatra sy ny fiovana.
- Atsangano ny riser hanamafisana ny sakafo.
- Ny rafitra gating dia tokony hapetraka mba hahazoana antoka fa mahatsapa ny fanamafisana ny lalana, tokony hatsangana ny fanangonana slag ary ny tazomina fihazonana ny slag, ary tokony hofenoina tsara ny rano mikoriana. Ny firafitry ny mpihazakazaka ao anaty dia tokony hampamangatsiaka ny casting.
- Ny dingan'ny fandrarahana dia manamaivana ny maripana araraka amin'ny varahina alefa mba hampihenana ny fihenan'ny rano ary hisorohana ny tsy fahamaotinana.
Ny fomba fanariana ny varahina dia manaparitaka ny ankamaroan'ny casting casting, casting fasika, casting centrifugal, casting tsy tapaka ary casting casting. Ny alika isan-karazany dia mila fidina amin'ny fomba kendrena.
Casting varahina dia firaka fanariana mifototra amin'ny firaka mimari-droa Cu-Zn. Ny elanelan'ny mari-pana kristaly dia kely ary tsara kokoa ny fahombiazany. Raha ampitahaina amin'ny varahina varahina dia manana toetra mekanika ambony kokoa ny varahina. Ankoatr'izay, satria ny varahina dia misy zinc marobe, dia ambany ny vidiny. Ireo no antony mahatonga ny cast cast varahina be mpampiasa.
Na izany aza, raha ampitahaina amin'ny varahina varahina sy alimo vita amin'ny alimina, dia tsy mahazaka harafesina ny varahina manary. Noho ny toetran'ny simika mavitrika an'ny zinc sy ny mety ho herin'ny electrode ambany dia azo inoana kokoa ho voahitsakitsaka ny varahina. Indrindra amin'ny rano an-dranomasina sy haino aman-jery manimba hafa misy electrolyte, ny fantsom-pifaneraserana dia vokarina eo anelanelan'ny dingana manan-karena varahina sy ny dingana manankarena zinc ao amin'ny firafitry ny varahina, izay manamafy ny harafesin'ny dingana manakarena zinc miaraka amin'ny mety ho electrode ambany, izay antsoina hoe harafesin'ny dezincification.
Ny solubility mafy ny zinc amin'ny varahina dia lehibe tokoa. Eo ambanin'ny fandanjana ny mari-pana ara-dalàna, 37% ny zinc no azo levona amin'ny varahina, raha amin'ny famokarana tena izy, 30% ny zinc no azo foanana ao anaty fanjakana as-cast. Noho izany, ny zinc dia manana valiny mafy orina amin'ny fanamafisana amin'ny varahina. Na dia manana tanjaka sy hamafin'ny asa ary fanatanterahana fikosehana aza ny varahina tsotra, dia tsy mahazaka fanoherana sy fanoherana harafesina, indrindra amin'ny rano an-dranomasina, etona ary asidra tsy miaina. Noho izany, singa kely hafa amin'ny alloying hafa (indrindra ny Mn, Al, Fe, Si, Pb, sns.) Dia matetika ampiana handatsaka varahina hanatsarana ny toetrany mekanika, ara-batana ary simika, ka amin'izany dia mamorona varahina manify manokana afaka mifanaraka amin'ny fampisehoana isan-karazany fepetra takiana. , Toy ny varahina fanapahana maimaim-poana, varahina an-dranomasina, varahina misy tanjaka avo ary varahina maty.
Ny halavan'ny mari-pana kristaly dia kely dia kely (eo amin'ny 30-40 ℃). Rehefa mitombo ny atin'ny zinc, dia mihena haingana ny maripana likida ary mihena arak'izany ny teboka miempo. Noho izany, ny varahina dia manana tsiranoka tsara ary mamorona lava-kazo mihena. , Tsy mora ny mamorona porosity sy ny fanasarahana intragranular. Ny varahina dia manana teboka miempo ambany ary misy zinc singa mora simba be. Rehefa etona izy dia afaka manakana ny firaka tsy hahazo gazy ary manaisotra ny entona ao anaty vatan'ny varahina, mba tsy dia misy gazy firy ao anatin'ny fizotry ny fandrendrehana. Noho izany, ny fanariana varahina amin'ny ankapobeny dia tsy mamokatra Stomata.
Mandritra izany fotoana izany, rehefa manaparitaka varahina, ny zinc mihitsy dia manana effets deoxidizing mahery, ary tsy mila agents deoxidizing hafa. Noho izany, mora vinaina kokoa ny varahina noho ny metaly varahina hafa ary manana fananana manary tsara kokoa. Noho ny fifamatorana avo lenta eo amin'ny zinc sy ny oxygen, ny oksida ZnO dia mora miforona mandritra ny fizotry ny fandrendrehana varahina, fa tsy toy ny Al2O3, dia tafasaraka mora foana amin'ilay ranoka varahina ho lasa slag. Raha mbola misy ny fepetra raisina hisorohana ny fitrandrahana alimika faharoa amin'ny alika, dia azo sorohina amin'ny ankapobeny ny lesoka ampidirina oksidasiôna. Ny tahan'ny fihenan'ny varahina dia lehibe, ary ny lavaka mavo mihena dia mora miorina mandritra ny fanamafisana. Noho izany, ny riser fihinana lehibe kokoa dia azo apetraka mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fanamafisana orina. Ny varahina dia manana ny mampiavaka ny fanamafisana toy ny akorandriaka ary tsy dia mora tohina amin'ny taham-pahamendrehana, noho izany ny toetra mekanika dia tsy dia mora tohina amin'ny fiovan'ny hatevin'ny rindrina.
Saika tsy misy varahina mimari-droa ampiasaina amin'ny famokarana casting. Mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampisehoana manokana sy hanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana, dia ampiasaina betsaka ny faritra fanariana varahina
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fanariana varahina
Ny serivisy fanamboarana Minghe Casting dia azo alaina ho an'ny famolavolana ny zava-misy sy ambany ho an'ny famokarana avo lenta ny fizaran-tsoratry ny alim-pako, ny ampahany amin'ny zinc, ny fanariana manezioma, ny fanariana titanium, ny fanariana vy, ny fanariana varahina, ny fanariana vy, ny fanariana varahina faritra sy maro hafa.
Safidio ny mpamatsy fanariana varahina tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fanariana varahina dia aondrana any Amerika, Kanada, Aostralia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana varahina vita amin'ny varahina dia manome casting an-dàlana maharitra sy mora vidy izay mahafeno ny fepetra arosonao ho an'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikasa fanariana varahina.